सडक महोत्सवमा भेटीए अनौठो प्रतिभा भएका १० वर्षीय पोखरेली बाबु(हेर्नुहोस भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. सडक महोत्सवमा भेटीए अनौठो प्रतिभा भएका १० वर्षीय पोखरेली बाबु(हेर्नुहोस भिडियो) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
सडक महोत्सवमा भेटीए अनौठो प्रतिभा भएका १० वर्षीय पोखरेली बाबु(हेर्नुहोस भिडियो)
२२ औ पोखरा सडक महोत्सवमा अनौठो प्रतिभा भएका बाबु भेटिएका छन।
कोरोना संगै ठप्प रहेको पर्यटकीय स्थल लेकसाईड यति बेला २२ औ पोखरा सडक महोत्सवले तताई राखेको छ। महोत्सव आयोजना गर्ने क्रममा धेरै खालका प्रतिक्रियाहरु आईराखेका छन।
यस्तै पोखरामा हिजो बेलुका एकजना अनौठो प्रतिभा भएका १० वर्षका बाबु फेला परेका छन। हजारौको संख्यामा उपस्थिति रहेको महोत्सवमा सबै जना बाजाको धुनमा नाच्दै थियो। यति मिठो धुन कताबाट आयो भन्दै हामी पनि हेर्न पुग्यौ।
>बिस्तारै अगाडी बढ्दा हामीले त्यहा एकजना १० वर्षीय बाबु आफ्ना बुवा सहितको समुह संग सांस्कृतिक प्रस्तुति राख्दै थिए। झट्ट हेर्दा समुहका अरु साथीहरु ३० वर्ष काटेका देखिनुहुन्थ्यो। बाबु त्यहा मादल लिएर बजाउदै थिए। हामीले नजिकै गैर एकैछिन क्यामेरामा कैद गर्यौ।
केहि बेरमा हामीले उहाको बुवासंगा पनि कुरा गर्यौ। सानोमा ३ वर्ष हुदा देखि बजाउन लागेका रहेछन बाबुले मादल। हामी पनि अचम्म पर्यौ।
यति सानो उमेरमा यति राम्रो बजाएर महोत्सवमा हजारौ दर्शकलाई नचाउदै थिए १० बर्षे पोखरेली बाबु। सबै जना अनाद मान्दै नाच्दै झुम्दै गरेको देख्न सकिन्थ्यो। हामीलाई लाग्यो यो प्रतिभा प्रस्पोतन गरिनुपर्छ र हामीले त्यही सोच अनुसार केहि दृश्य हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका छौ।
हेर्नुहोस भिडियोमा यो अचम्मको प्रतिभा महोत्सवमा आउनुभएका सबैलाई लथाउदै १० बर्षीय पोखरेली बाबु
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको January 1, 2021 January 1, 2021 274 Viewed